Sida loogu isticmaalo elektaroonigga ah DNI ama DNIe ee Mac | Waxaan ka socdaa mac
Sida loogu isticmaalo elektaroonigga ah DNI ama DNIe ee Mac ah
Paul Aparicio | | Kombiyuutarada Mac, Tababarada
Hadda seddex sano ka hor waxaan cusbooneysiiyay kaarka aqoonsiga. Waxaan haystay nuqulkii hore, oo aan u malaynayo inaan xasuusto wuxuu ahaa dukumenti weyn oo asalkiisu buluug yahay kan ugu yarna wuxuu ila muuqday xoogaa «casri ah», markii aan arkay jabinta DNI-da cusub waxaan is idhi: «Oo maxaa loogu talagalay ? » Hagaag, waa jajabka 'DNIe' iyo, sidaad wada ogtihiin, tusaale ahaan, "e" ee "e-maylka", "e" badiyaa macnaheedu waa "elektaroonig" Laakiin maxaa loogu talagalay? Sidee u isticmaashaa DNIe on Mac?
DNIe waa dukumiinti u adeegta fulinta qaar Nidaamka internetka, tusaale ahaan. Waa wax la mid ah sida xawaaladaha bangiyada looga sameeyo internetka laakiin, si macquul ah, oo leh tallaabooyin nabadgelyo oo ballaaran. Adduunyada xisaabinta ee qof walba u adeegsado Windows, helitaanka inuu ka shaqeeyo Mac waxaa laga yaabaa inaysan sahal ahayn taasna waa sababta aan u go'aansanay inaan ku qorno tilmaamahan yar. Marka xigta waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo ay tahay inaad ogaato inaad u adeegsato DNIe-ka Mac oo aadan dhiman isku dayga.
Kahor intaadan bilaabin casharka, waa inaad ogaataa inaad u baahan tahay aqoonsi aqoonsi elektiroonig ah si aad u dhammaystirto hawsha oo dhan. Haddii aadan weli mid haysan, hoosta waxaad ku leedahay xulasho noocyada qiimaha ugu tayada fiican si aad ugu isticmaali karto aqoonsigaaga elektarooniga ah Mac-gaaga. Haddii aad horey u lahayd mid, waxaan ku billaabi doonnaa howsha tallaabo tallaabo ah.
Ku kalsoonow akhristaha DNI, ...
Sveon SCT011M - Akhriste ...
Akhriska Aqoonsiga Wexter ...
1 Xagee lagala soo bixi karaa shahaadada DNIe
2 Sida loo isticmaalo qalabka elektiroonigga ah ee DNI ee ku jira Mac
3 Akhristaha elektaroonigga ah ee DNI ee loogu talagalay Mac
Xagee lagala soo bixi karaa shahaadada DNIe
Kahor intaadan sameyn nooc rakibid cusub (oo aan cusbooneysiin, dabcan), waxaa haboon inaad hubiso inaanan haysan wax ka harsan rakibo hore oo suurtagal ah. Haddii aan hubno inaanan waligeen isticmaalin, waxaan si toos ah ugu tagi karnaa rakibidda darawalada cusub. Haddii kale, waxaan ka saari doonnaa wixii raad ah annagoo sameyneyna waxyaabaha soo socda:
Waxaan fureynaa Terminalka. Waxay ku jirtaa galka Codsiyada / Adeegyada, laga bilaabo Launchpad Dock ama ka raadinta tooshka.
Waxaan qoraynaa xikmad si aad u dhaqaajiso superuser.
Waxay na weydiin doontaa lambarka sirta ah ee isticmaaleheena. Waan soo bandhigeynaa.
Waxay sidoo kale na weydiin doontaa lambarka sirta ah. Waxaan soo bandhigeynaa midka aan dooneyno, laakiin waa u qalantaa inuu noqdo mid aan xasuusan karno haddii aan waligeen dooneyno inaan mar kale sidan oo kale wax ku qabanno.
Waxaan tagnaa / Maktabadda oo tirtirnaa faylka 'Libpkcs11-dnie'
Waxaan fureynaa terminal oo waxaan galnaa waxyaabaha soo socda:
sudo rm / var / db / rasiidhada / * dni *
Hadda waxaan ku shaqeyneynaa koontada asalka ah amarka dsenableroot –d
Hadda oo aan haysanno wax walba oo nadiif ah waa inaan tagnaa BOGGAAN, soo dejiso feylasha oo rakib.
Sida loo isticmaalo qalabka elektiroonigga ah ee DNI ee ku jira Mac
Iyada oo faylka horay loo rakibay, rakibid sida ugu fudud ee laba-gujinta faylka .pkg iyo raacitaanka tilmaamaha (oo ay ku jiraan gelitaanka lambarka sirta isticmaalaha), waxaan u gudbeynaa u qaabee oo u isticmaal DNIe on Mac. Waxaan ku sameyn doonnaa annaga oo raacayna talaabooyinkan:
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah, hadii aynaan rakibin, tag Bogga Mozilla, soo dejiso oo rakib biraawsarka Firefox. Taariikh ahaan, Safari si wanaagsan ugama aysan helin bogag badan oo shabakadda ah waana tan sidoo kale ku dhacda noocan ah shahaadooyinka ma la shaqeynayaan biraawsarka aasaasiga ah ee OS X. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer, waxaa habboon in mar labaad la helo bog furaha shabakadda, wixii dhici kara, aniga ahaanna Firefox ayaa ah ikhtiyaarka labaad ee ugu fiican mac.
Tallaabada xigta waa in lagu rakibo shahaadada Firefox. Si tan loo sameeyo, waxaan fureynaa Firefox, waan fureynaa Doorbidka / Sare / Shahaadooyinka oo guji Aaladda nabdoonaanta.
Waxaan riixnaa Load.
Waxaan siinaa moduleka magac (tusaale ahaan, moduleka DNIe PKCS 11).
Waxaan gacanta ku muujineynaa wadada moduleka oo noqon doonta waxyaabaha soo socda: Library / Libpkcs11-dnie / lib / libpkcs11-dnie.so
Waxaan gujinaynaa aqbal.
Si loo rakibo shahaadada asalka ah ee aan u soconno Doorbidyada / Horukacsan /Shahaadooyinka/ Eeg shahaadooyinka / Maamulka.
Waxaan doorannaa Soo dejin.
Waxaan u soconaa wadada shahaadada ku jiri doonta / Maktabad / Libpkcs11-dnie. Xaaladdayda, waxay ku jirtay galkaas si toos ah. Haddii aysan halkaas oolin, waxaan ka raadinnaa galka Wadaagga isla waddadaas.
Waxaan calaamadeyneynaa saddexda sanduuq.
Ugu dambeyntii, waxaan gujineynaa OK.
Waa ikhtiyaari, laakiin waa lagugula talinayaa, Dib u bilaw kumbuyuutarkaaga si aysan ugu dhicin dhibaato kasta oo lama filaan ah. Marka dib loo bilaabo, wax walba waa inay shaqeeyaan dhib la'aan. Waxa kale oo xiiso leh in aan lagu xidhin akhristaha DNIe ilaa Mac-gu bilaabmayo.
para hubi in wax waliba shaqeeyaan si sax ah, waad heli kartaa boggan waxaa bixiyay isla Booliskii Qaranka . Haddii boggu uusan soo rarneyn, wax aan qabannay ama wax khaldamay. Waxay noqon kartaa inuusan jirin kaar la geliyay, tusaale ahaan. Waxa ugu fiican ee kiisaskan waa in laga saaro oo la dhigo USB-ga elektaroonigga ah ee akhristaha DNI markale, hubi inuu jiro kaar oo dib loo bilaabo markale. Haddii aynaan khaladka helin, waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan in laga soo bilaabo bilowgii, laakiin markan dhammaan tallaabooyinka ayaa lagama maarmaan noqon doona, oo ay ku jiraan ka saarista noocyadii hore ee darawallada iyo shahaadada.
Xusuusnow in shahaadadu waxay shaqeyn doontaa oo keliya 30 maalmood. Waqtigaas ka dib, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la soo dejiyo oo la rakibo shahaadada mar labaad.
Akhristaha elektaroonigga ah ee DNI ee loogu talagalay Mac
Wax kasta oo kor lagu sharaxay na caawin maayaan haddii aanaan haysan a aqriyaha aqoonsiga elektarooniga ah. Si la mid ah waxaan u baahan doonaa akhristaha dibedda si aan u awoodo inaan ku aqrino kaararka SD-ka iMac, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan soo iibsanno aqriyaha aqoonsiga elektarooniga ah.
Akhriste kee mudan in la iibsado? Hagaag taasi waa su'aasha milyanka dollar ah. Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo badan oo iyaga ka mid ah ayaa si dhammaystiran noogu adeegi doona, laakiin waxaan sidoo kale ka heli karnaa wax khadka tooska ah oo aan u qalmin. Waxa aan badanaa sameeyo markaan rabo inaan wax iibsado ayaa ah fiiri Amazon, kaas oo aniga ila ah dukaanka ugu fiican ee khadka tooska ah ee jira. Intaa waxaa dheer, in kasta oo ay run tahay in faallooyinka qaarkood la iibsan karo ama khiyaano lagu sameeyo, Amazon waxay isku dayeysaa inay ka hortagto faallooyinkan inay ka soo muuqdaan degelkeeda, sidaas darteed inta badan dib u eegista aan aqrinay waxay noqon doonaan run.
Ikhtiyaar wanaagsan, oo runtii ah iibiyaha lambarka 1 ee noocan ah akhristaha ku yaal Amazon, ayaa ah DNI elektronik ah , laakiin waa! Waxaa loogu talagalay Windows iyo Linux. The CoolBox CRCOOCRE065 Waxay leedahay qiimeyn xitaa kafiican waana loo heli karaa Mac. Laakiin taxaddar, marwalba hubso in loo heli karo Mac.
Waa maxay Miyaad horeyba u taqaanay sida loo isticmaalo elektaroonigga ah DNI ee Mac?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loogu isticmaalo elektaroonigga ah DNI ama DNIe ee Mac ah
Aad baad ugu mahadsan tahay casharka, aad u faa'iido badan oo fudud in la sameeyo
Isticmaalaha Amstrad dijo
Si aad u wanaagsan ayaa loo qabtay casharka. Laakiin ... Miyuu jiraa qof isticmaala qalabka elektarooniga ah ee DNI?, Fashil kale oo maamulka ah.
Sidee kuheli kartaa inaadan dibada ku noolayn 😉
Mahadsanid, waxaan iskudayey inaan rakibo waqti dheer mana jirin wado. Had iyo jeer waxaan ku haystay daaqadaha waana u xiisay. Dabcan waa waxtar badan, ugu yaraan aniga ahaan.
Haye, dhibaato ayaan ku qabaa xarunta, maadaama aysan aqoonsaneyn eraygeyga sirta ah, waxaan u maleynayaa inay tahay inaan horey u haysto midna mana xasuusto…. Suurtagal ma tahay in la ogaado?
Jawaab Sergio Martos Sánchez
Tijaabi xididka ama toor
Waad salaaman tihiin, rakibayaashu waxay ii sheegayaan in dhibaato dhacday oo aan hadda la rakibin
Waad salaaman tihiin, waan awoodaa inaan rakibo barnaamijka, qalad buu i siinayaa oo rakibidu ma dhamaaneyso.
Waxaan u cusbooneysiiyay macOS Sierra oo waxaan isku dayayaa inaan rakibo faylka .pkg qalad buu i siiyaa. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan sugno xirmada Sierra in la cusbooneysiiyo?
Taasi aniga xitaa way dhacdaa. Iyada oo leh Sierra, DNIe-keyga ayaa joojiyay shaqadii
Ku jawaab rfacal
Isticmaalka DNIe ee Mac waa jirdil. Waad ku mahadsan tahay casharradii lagu daabacay Soydemac waan gaadhay: laakiin farxaddayda ku jirta ceelka OS Sierra-da cusub. Waxay muhiim u tahay shaqadayda inaan haysto saxeexa dhijitaalka ah, ha noqdo Shahaadada FNMT ama DNIe oo labadaba way igu fashilmaan. Waxaan tixgelinayaa inaan iibsado Windows PC (iyo xitaa anigoo adeegsanaya Explorer, oo umuuqda inay tahay waxa kaliya ee FNMT iyo DNIe si fiican u aqoonsadaan). 25 sano ka dib anigoo isticmaalaya kaliya Mac waxaan u arkaa cabitaan xun, runtiina waxay noqon doontaa kaftanka taangiyada kalluunka ila shaqeeya. Ma jiraa qof macquul ah oo laga filan karo in DNIe uu ku shaqeyn karo Mac cusbooneysiiyay? (ama shahaadada: waa isku mid: Waan ka sii jeclahay. Markii la shubayna way ka dhaqso badneyd)
Oo miyaanay ka fududayn oo ka jaban tahay inaad Windows ku rakibto Mac-kaaga oo aad u adeegsato adoo adeegsanaya xerada boot-ka ama aad ku abuuri karto mashiin casri ah VMWare? Sikastaba, waan kugu raacsanahay, isticmaalka DNIe ee Mac waa jirdil, laakiin qaladku wuxuu kujiraa faa iidada Maamulka. Hore ayaan u gaadhay, laakiin hadda waxaan u baahanahay inaan mar kale u isticmaalo oo jid ma jiro. Ma garanayo haddii ay tahay sababta oo ah waxaan isticmaalayaa beta-ka macOS, yaa garanaya. Wixii aan dhib ku qabin waagii hore waa shahaadada aad kala soo baxdo FNMT oo aad u isticmaasho Firefox, in kasta oo ay horeyba kuugu qasbayeen inaad isticmaasho biraawsarkaas halkii aad ka isticmaali lahayd Safari, oo ah mid kale.
Ku jawaab mag
Suuragal maaha Siiraal
Ku jawaab javierfc
Iima oggolaaneyso inaan ku daro maktabadda / Libpkcs11-dnie / lib / libpkcs11-dnie.so module
Ku jawaab celiamoar
Ma ku qaban karo Sierra waanan u baahanahay. Ma jiraa qof awood u leh inuu rakibo?
Ku jawaab pedrazajaAngel
Estibaliz Ivars Miralles dijo
waa inaad sameysaa sayid si aad u rakibto akhristaha, mana jirto hab lagu helo
Jawaab Estíbaliz Ivars Miralles
Suura gal maaha in lala galo Sierra ... wado ma jirto
La xaliyay! Si aad u rakibto xirmada .pkj, waa inaad Firefox ku rakibtaa Mac-da, haddii uusan rakibnayn, waxay bixisaa qalad markaad rakibayso .pkj-ka. Marka xirmada la rakibo, waxaad arki doontaa talaabooyinka la raacayo si aad uhesho Firefox si aad ugu adeegsato aqoonsiga elektarooniga ah. Waxay umuuqataa in kani yahay biraawsarka kaliya ee lashaqeeya DNI-ga Mac-da waa Firefox
Fadlan ma sheegi kartaa halka ay talaabooyinka la raacayo ka muuqdaan marka la isku hagaajinayo Firefox si aad ugu isticmaali karto DNIe?
Waxaan soo degsaday Firefox oo markaan rakibayo feylka pkg qalad buu i siiyaa.
Waa salaaman tahay: Wax kasta oo rakibay oo shaqeynaya si sax ah, laakiin waxaad dhahdaa: «Xusuusnow in shahaadadu ay shaqeynayso oo keliya 30 maalmood. Waqtigaas ka dib, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la soo dejiyo oo la rakibo shahaadada mar labaad. Aaway shaygii la soo dejinayay oo dib loo dhigay? Ma i siin kartaa xiriirin bogga ah oo aan ahayn xiriir toos ah soo dejin fadlan? Aad baad ugu mahadsantahay horay. Salaan.
Jawaab Ramón Martínez de Velasco
@Pablo Aparicio: Ma ka jawaabi kartaa faaladayda, fadlan? Aad baad ugu mahadsantahay horay. Salaan.
Salaan! Qof ma i caawin karaa? Waxaan raacay tillaabooyinka oo dhan laakiin markii aan soo galo boggaaga amniga bulshada waxay ii sheegtaa inaysan jirin wax shahaadooyin ah oo la rakibey ...
Ku jawaab Yoshian
Khalad ayaan ku dhacaa markaan iskudayo inaan buuxiyo feylka moduleka?
Aad baad ugu mahadsan tihiin shaqada oo dhan
Ku jawaab fabiola
Galab wanaagsan, aan aragno haddii aad i caawin karto, markii aan rakibo faylka libpkcs11-dnie.so, waxay ii sheegaysaa in "Digniin, module laguma dari karo." Ma taqaan waxa la sameeyo?
Waxaan si sax ah u haystaa dhibaato la mid ah tii David, fariin isku mid ah markii aan isku dayayay inaan rakibo moduleka: "Digniin, moduleka laguma dari karo"
Waad salaaman tihiin !! Waxaan u maleynayaa in qaladka PKG uu bixiyo ay sabab u tahay Firefox oo aan la rakibin, waxay i siisay isla qaladkii! isku day !!!
Waxaan soo degsadaa qaybtii hore oo aan mar kale u fooraro, waan nadiifiyaa rakibidda oo waxaan mar labaad bilaabayaa hawsha oo dhan, laakiin ma awoodo inaan akhriyo DNIe.
MacBook Pro oo leh OS OS
Ku jawaab Zurupeto
Ma aqaan inta jeer ee aan rakibo, tirtiro oo aan dib-u-rakibo, anigoo raacaya dhammaan tillaabooyinka. laakin markaan isku dayo inaan galo wakaalada canshuuraha waxay i siisaa qalad 403 waa quus…. ma heli karo Dnie…. laakiin tusaale ahaan markii Firefox uu i weydiisto inaan galo shahaadooyinka, wuxuu galayaa dhibaato la'aan…. Bawlos !!!! wax fikrad ah ma ka haysaa waxa dhici kara?
qof ayaa garanaya meel ay ku rakibayaan (sida iska cad aniga horteyda)
Waxaan raacay talaabooyinka mana ii shaqeyneyso, qalad ayaan siiyay markii aan moduleka raacayay. Xalku wuxuu noqdey LOGIN oo leh PKCS CUSUB # 11 MODULE. Talaabooyinka la raacayo: furitaanka mozilla> doorbidka> asturnaanta iyo amniga> aaladaha amniga> xulo NEW PKCS @ 11 MODULE> dhagsii START SESSION> waxay ku weydiin doontaa kaarka Aqoonsiga> aqbal. Kadib waa inaad si buuxda uxirtaa mozilla> amarka + Q oo dib u fur mozilla. Waqtigaas waxay durbaba aqoonsan tahay moduleka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad la shaqeyso DNIe.
Kaliya tan ayaa igu dhacday aniga: waxay ii sheegaysaa inaysan qaadi karin moduleka DNIE-PKCS # 11, ka dib waan soo dejinayaa (waan tirtiraa gudaha Firefox Preferences) oo dib ayaan u cusbooneysiiyaa, laakiin badhanka 'START' ma shaqeynayo.
Haddii aan doorto akhristaha ("Generic Smart card ..." oo hoos imanaya qaybta 'DNIE-PKCS # 11 module') qeexitaannada waxaa ku qoran "Ma jiro" markaa waxaan ku xayirayaa halkan.
Akhristaheygu wuxuu leeyahay xiriir usb ah oo caadi ah laakiin MacBook-kayga oo aan la socdo OS Catalina wuxuu leeyahay godka ugu yar ee USB-ga (bareelo oval ah oo aanan magaca ku xasuusan) laakiin waxay aqoonsaneysaa akhristaha (Ewent 1052), sababtoo ah «About my Mac / USB» waa halkaa si qumman.
Wax kale: shahaadada oo dhacaysa bil gudaheed ma "ac_raiz_dnie.crt"? Shahaadadan miyaa la soo dejiyey markii aad rakibtay "libpkcs11-dnie-1.3.1_OSX-10.10_10.11.dmg"? Marka, mar kasta oo aad rabto inaad isticmaasho DNI-E in yar ka dib waa inaad nadiifisaa Xulashooyinka oo aad dib u dhigtaa wax walba?
Waan qadarin doonaa caawinta. Ma ogi in golahu wali nool yahay. Waxaan uga tagayaa e-maylkeyga haddii ay dhacdo in qof ku ag maro oo caddeeyo shakigeyga.
ma jirto wado lagu helo tan:
Waxaan u soconaa wadada shahaadada oo ku jiri doonta / Maktabada / Libpkcs11-dnie. Xaaladdayda, waxay ku jirtay galkaas si toos ah. Haddii aysan halkaas oolin, waxaan ka raadinnaa galka Wadaagga isla waddadaas.
waa ceeb laakiin… .. mid baa dhamaada, dib ugu noqda Windows wax aad muhiim ugu ah maalmaheena sida isticmaalka shahaadada DNI. Qofna ma oga in ay jiraan isticmaaleyaal aan barnaamijyaqaan ahayn iyo in aan aad ula qabsannay barnaamij na weydiinaya in aan buuxino meelaha qaar oo ay ku dhammaato rakibidda barnaamijka la doonayo? Waxay ahayd INFINITELY fududahay in la rakibo xirmada Adobe oo dhan intii la isku dayi lahaa in aqoonsiga elektarooniga ah uu shaqeeyo.
Ugu dambeyntii waxa kaliya ee aan sameeyaa waa inaan weydiisto wiilkayga inuu ii oggolaado inaan isticmaalo kombuyuutarkiisa.
Jawaab Manuel Canteli Rodriguez
Isla waxbaa igu dhaca aniga: Digniin Suuragal ma ahan in lagu daro moduleka. Adeegsiga lacagta ku jirta .Mac waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn.
Ku jawaab Mari Cruz
Tan iyo markii la rakibay Catalina…. Waa wax aan macquul aheyn in la isticmaalo DNIe.
Ku jawaab Aurelio
Waxaan u cusbooneysiiyay OS Catalina waana inaan dib u cusbooneysiiyaa wax walba.
Waad ku mahadsantahay casharka
Ciise G. dijo
In badan oo fiiro gaar ah loo yeesho tan: ee ku saabsan FIREFOX, waxay umuuqataa in laga bilaabo maanta (Maarso 2020), kaliya nooca FIREFOX 68 uu ansax yahay.
Kuwa dambe ayaan ansax ahayn, maadaama aysan ku darin ikhtiyaar amni oo lagama maarmaan ah in si sax ah loo rakibo shahaadooyinka.
Tan waxaa lagu muujiyay bogga FNMT, ee nidaamka looga baahan yahay Mac.
Jawaab Jesús G.
Ma rakibi karo …….
Waxaan helaa laba sanduuq si aan u tifaftiro kalsoonida halkii aan ka noqon lahaa saddex…
Ma jirto wado….
Mahadsanid, waad i badbaadisay!
Ku jawaab mogli
Waad salaaman tahay, howsha waan qabtay tan iyo bilowgii, anigoo tirtiray dhamaan raadadkii galka sida Pablo yiri. Wax walba waxay si fiican ugu shaqeeyaan Catalina iyo bit4u DNIe akhristaha. Is-saxeex, ok. Dijital ahaan kula saxeex PDFs adobe iyo DNIe, ok.
Jidka Mozilla Firefox waa mid duugoobay labadaba halkan iyo bogga dowlad-xumada Spain
Jawaab Churraco @
Kuma shaqeyneyso MacOS Big Sur.
Waxaan isku dayayaa inaan ku rakibo Mac oo leh Mojave (waxaa jira laba nooc oo ku yaal bogga booliska 1.5.0 iyo 1.5.1, waxaan isku dayayaa inaan rakibo 1.5.1). Waxay umuuqataa in lagu rakibayo qaladaad la’aan. Dhamaadka rakibidda, waxay fureysaa Firefox tab oo leh tilmaamaha ku xusan "Sida loo isticmaalo aqoonsiga elektarooniga ah ee Mac."
Si kastaba ha noqotee, markaan cusbooneysiiyo moduleka oo aan u tago raadinta dariiqa maktabadda si aan u raaco tallaabooyinka, ma jiraan wax jira, ma jiro galka "Libpkcs11-dnie". Marka ma sameyn karo talaabooyinka Firefox ii sheegto.
Tani qof kale ma ku dhacday, sidee wax looga qaban karaa?
Su’aal kale oo u muuqan karta wax aan macquul ahayn, ma loo baahan yahay in akhristaha lagu xidho USB-ga inta hawsha rakibidu socoto iyo DNIe oo la gelinayo akhristaha? Tan waxaa laga yaabaa inay wax ku leedahay kor ku xusan.
Waxaan aad ugu deg degsanahay inaan saxo tan si aan u soo bandhigo dukumiinti iyo taageerada farsamo ee booliisku ima caawinayso…
Haddii aan haysto shahaado FNMT ah, miyaa sidoo kale inaan marka hore tirtiro? Mise looma baahna? Taasi miyaa kahor intaanan haysan NIE oo aan haystay shahaadada FNMT si aan u sameeyo habraac laakiin hada waxaan haystaa DNIe oo waxaan doonayay inaan rakibo this. si cad tiknoolajiyaddu ma ahan waxa aan
salaam. Waxaan iibsaday akhristaha kalsoonida leh ee aad ku taliso maqaalka waxaanan haystaa MAC HIGH SIERRA 10.13. sida muuqata lama taageero. sababtoo ah markaan haysto dhammaan kaarka khariidadda la soo dejiyey, ma ogaanayso akhristaha inuu bilaabo fadhiga.
Akhriste maxaad kula talinaysaa nooca MAC? Mahadsanid
Ma ii oggolaan doonto inaan soo dejiyo barnaamijka, markaa waxba ma samayn karo. U fasiro inuu yahay fayras ama wax la mid ah. Waxaan ka tijaabiyey Safari iyo Chrome. Macquul maaha.
Waxaan ku guuleystey in aan rakibo wax walba, waxaan xaqiijiyay in ay ku shaqeeyaan awaamiirta bilayska laakiin marka aan rabo in aan isticmaalo bog kasta oo kale waxay i siinaysaa qalad. Had iyo jeer waxay i waydiisaa erayga sirta ah (Fadlan geli furaha sirta ah ee PKCS#11 electronic DNI token.) kaas oo aan fahmay inuu yahay midka aan ku dhejiyay DNIe ee saldhiga booliiska laakiin ma shaqaynayo. Ma jiraa qof garanayaa waxa dhibku yahay?
Ku jawaab Lola
Apple wuxuu sii daayaa beta seddexaad ee OS X 10.11.6 El Capitan